सरकार सनक सिं, लकडाउन सनक | Ratopati
कोरोना कैरन – १४
सरकार सनक सिं, लकडाउन सनक
personखगेन्द्र संग्रौला exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २०, २०७७ chat_bubble_outline0
‘बुझ्दै जाँदा यो लकडाउनलाई यस्तो अवैज्ञानिक तरिकाले अघि बढाउनुमा जनस्वास्थ्य नभई राजनीतिक कारण बढी देखिन थाल्यो । त्यसैले हालको अवस्थामा उच्च जोखिम बाहेकका अधिकांश ठाउँमा लकडाउनको औचित्य के हो, प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’
—टेवीटे समीर एम दिक्षित, पीएचडी
श्री समीर आफ्नो विषयमा दह्रो दक्खल भएका पीएचडी हुन् । यी उदार मनुवा लोकलाई मौसमको प्रायः सही भविष्यवाणीको निःशुल्क ज्ञानदान गरिरहन्छन् । कोरोना भाइरस सम्बन्धी यथार्थको ज्ञानदानमा हाल यी नित्य क्रियाशील छन् । थपिँदो लकडाउनमा यिनले कर्ताको निहित राजनीतिक स्वार्थको छनक पाएका छन् । तर यी प्वाक्क मुख फोरेर भन्दैनन्, लजाउँछन् । र, केवल ‘प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ’ भनी छिसिक्क सङ्केतमात्र गर्छन् । शायद यिनलाई मलाईजस्तै सर्वज्ञानी प्रधानमन्त्रीले अस्थिरताकारी तत्वको आरोप लगाउलान् भन्ने डर छ ।
‘प्रश्नचिन्ह’ सही हो समीरजी । थपिएको यो लकडाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीको सनकको एकल क्रीडा हो । निजहजुरको राजनीतिक दाउ पूरा गर्ने एक बहाना हो यो । लकडाउनको सिक्रीले मानिसहरुका हातखुट्टा बाँधेर, तिनका मुख थुनेर सिंहासनमा टाँसिइरहने पदलोलुप दाउ । आफ्नो जालझेलको कुटिल कलामा मायावी कार्चोपी भरिरहने चटके दाउ । हो, राजधानी खाल्डोमा न संक्रमण फैलिरहेको सबुत छ, न संक्रमित पात्रहरुमा चर्को व्यथा नै कतै गोचर भएको छ । यथार्थ यस्तो छ त घ्याच्च–घ्याच्च लकडाउन थपिरहनुको तात्पर्य के ?
हाललाई मिति गुज्रिएको यो लकडाउन हो पनि र होइन पनिजस्तो छ । ईश्वरवल्लभको कविताजस्तो— ‘आगोका फूलहरु हुन्, आगोका फूलहरु होइनन्’ भन्यास्तो । लकडाउन कतै दमनकारी औतारमा उपस्थित छ, कतै पूर्ण अराजकता छ । अचम्म छ, लडकाउन लाउने पनि सरकार, लकडाउन तोड्ने पनि सरकार ! नागरिकले जान–अन्जान लकडाउन तोडे उसलाई दुनियाँले देख्ने गरी अपमान गरिन्छ । दिनभर ठिङ्गे लगाएर उसको हुर्मत लिइन्छ । सनासोले च्पापेर उसलाई पशुलाइझैँ धकेलिन्छ । तर सरकारका प्रतिबद्ध भजनकर्मीहरुलाई लकडाउन तोड्न हाकाहाकी छूट छ । प्रधानमन्त्रीको सदिच्छा बमोजिक पूर्व आइजीपी र पूर्व मन्त्रीलाई जनकपुरबाट सांसद ‘अपहरण’ गरेर काठमाडौँ ल्याउन बाटो खुला छ । तिनलाई कहीँ कतै केही रोकटोक छैन । विराटनगरबाट बसमा थानकोट आइपुगेका नागरिकहरुलाई उपत्यकामा पस्न निषेध छ । सरकारी अखिल र युवा संघका तरुणहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयसामु मौरीको गोलोसरी झुम्मिन छूट छ । अत्यावश्यक आपसी दूरीको सरासर अवज्ञा गर्न तिनलाई छूट छ । लकडाउन तोडदै ‘बाबुराम भट्टराई मुर्दावाद’ भन्न तिनलाई छूट छ । नेवि संघका तरुणहरुलाई दूरी मिलाएर सनो झुण्डमा ‘अध्यादेश मुदार्वाद’ भन्न वर्जित छ । सरकारी तरुण र प्रहरीहरुमाझ मानौँ मामा–भानिजको नाता छ । नाराबाज भानिजहरु लकडाउनका यावत् संहिता तोड्दै ताण्डव रच्छन्, सुरक्षाकर्मी मामाहरु कानमा तेल हालेर रमिता हेर्छन् । उता नेवि संघका तरुणहरुलाई भेटे ठाडै शिकार गरुँलाझैँ गरी यी मामाहरु लखेट्न् । आखिर प्रभुको सदिच्च्छा हो । निजहजुरको अकाट्य सदिच्छासामु कसका बाउको पिताम !
नागरिकले जान–अन्जान लकडाउन तोडे उसलाई दुनियाँले देख्ने गरी अपमान गरिन्छ । दिनभर ठिङ्गे लगाएर उसको हुर्मत लिइन्छ । सनासोले च्पापेर उसलाई पशुलाइझैँ धकेलिन्छ । तर सरकारका प्रतिबद्ध भजनकर्मीहरुलाई लकडाउन तोड्न हाकाहाकी छूट छ । प्रधानमन्त्रीको सदिच्छा बमोजिक पूर्व आइजीपी र पूर्व मन्त्रीलाई जनकपुरबाट सांसद ‘अपहरण’ गरेर काठमाडौँ ल्याउन बाटो खुला छ । तिनलाई कहीँ कतै केही रोकटोक छैन ।
कहाँ के गर्ने, के नगर्ने ? कसले के गर्न पाउने, कसले के गर्न नपाउने ? लकडाउनको संहिता हास्यास्पद सनकमा आधारित छ । लकडाउनको कुनै सविचारित योजना छैन । कुनै स्पष्ट नियम छैन । संहिता र नियम सत्ताबली, पहुँचबली, धनबली र बाहुबलीका लागि एउटा छ, अकिञ्चन र निमुखा नागरिकका लागि अर्कै छ । पूर्व छापामार मन्त्री वर्षमान पुन छापामार शैलीमा राति ३ बजे कोटेश्वरमा फुत्त प्रकट हुन्छन् । यी मन्त्री माननीय आफ्ना मतदाता उर्फ सत्तामा उक्लिने भर्‍याङहरुलाई बसमा कोचाकोच हुने गरी भित्र्याउँछन् । र, तिर्र सिठ्ठी बजाएर तिनलाई रोल्पातिर चलान गर्छन् । लकडाउनको मर्यादा पालन गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु मन्त्री महोदायलाई झ्याप्प सलाम ठोक्छन् । मन्त्री भनेको मन्त्री हो, ठूलो र ठालू । ओलीतन्त्रको मन्त्रीलाई लकडाउनको संहिताले छुँदैन । ठालू मन्त्रीसामु सुरक्षाकर्मी लकडाउनलाई तोड्न विवश हुन्छ ।
अर्को घटना छ, जसमा सिधासादा नागरिकको कन्तबिजोकको कथा छ । सुनसरीको दुबही हुँदै घर जान निस्केकाहरु बालकुमारीमा बसभित्र कैद भएका छन् । तिनलाई प्रहरी न जान दिन्छ, न निस्कन दिन्छ । माथिको आदेश यस्तै छ ! भोजपुरकी शान्ता तामाङको काखमा वर्ष दिनको बच्चा छ । रुँदै उनी भन्छिन्, ‘गाडीमा बसेको दुई दिन भयो । खाने–पिउने केही छैन । रातभर लामखुट्टेले टोकेर सुत्न दिएन ।’ तिनको बिलौना सुन्न चतुरमति मन्त्री वर्षमान पुन त्यहाँ हाजिर छैनन् । ‘अब आसँ खसाउनु पदैन’ भन्ने कवि खड्गप्रसाद शर्मा ओली दरबारको कौसीबाट तल धूलामा तिनका आँसु देख्दैनन् ।
तरकारी बजार हेर्नु, पसलैपिच्छे मान्छे झुरुम्म देखिन्छन् । कतै केही सस्तो छ भन्ने छनक पाए त मान्छे झन् मौरीको गोलोसरी झुम्मिन्छन् । प्रहरीबन्धु बाहिरपट्टि आफू र अरुलाई कुनै बाधा नपारी लुखुर–लुखुर हिँडिरहेको मनुवालाई कडा केरकार गरिरहेको हुन्छ । काँ हिँडेको ? लकडाउन थाहा छैन ? तरकारी किन्ने निहुँले किन यता हल्लिरहेको ? दिनभर होल्डमा बस्ने हो ? भित्रको भीडमा जहाँ सुरक्षाकर्मीको खाँचो छ, त्यहाँ ऊ हाजिर छैन । बाहिर जसले केही बिगारेको छैन, त्यहाँ ऊ उसलाई थर्काउनमा मस्त छ । शायद उसलाई कहाँ के गर्ने भन्ने मिहिन प्रशिक्षण नै छैन । माथि बालुवाटारदेखि तल सडकसम्म सब कुरा सनकको भरमा चलेको छ । माथि ठालु ख्वामितहरुको सनक, तल ठालुहरुद्वारा उपेक्षित र तिरष्कृत प्रहरीहरुको सनक । माथि ठालुहरु आफ्नो विलासी हबेलीभित्र शायद ‘एन ९५’ मास्क लगाएर सुरक्षित भएका होलान् । तल सडकमा प्रहरीहरु दश रुपियाँको मास्क लगाएर दिनभरि भोकभोकै ड्यूटी गर्न अभिशप्त छन् ।
भित्रको भीडमा जहाँ सुरक्षाकर्मीको खाँचो छ, त्यहाँ ऊ हाजिर छैन । बाहिर जसले केही बिगारेको छैन, त्यहाँ ऊ उसलाई थर्काउनमा मस्त छ । शायद उसलाई कहाँ के गर्ने भन्ने मिहिन प्रशिक्षण नै छैन । माथि बालुवाटारदेखि तल सडकसम्म सब कुरा सनकको भरमा चलेको छ । माथि ठालु ख्वामितहरुको सनक, तल ठालुहरुद्वारा उपेक्षित र तिरष्कृत प्रहरीहरुको सनक । माथि ठालुहरु आफ्नो विलासी हबेलीभित्र शायद ‘एन ९५’ मास्क लगाएर सुरक्षित भएका होलान् । तल सडकमा प्रहरीहरु दश रुपियाँको मास्क लगाएर दिनभरि भोकभोकै ड्यूटी गर्न अभिशप्त छन् ।
लकडाउनका आँखा छलेर लामो दूरीका वाहन आइजाइ गरिरहेकै छन् । तिनमा आपसी दूरीको कुनै पर्वाह छैन । शासक सत्ताको दाउमा लिप्त छ, त्यो देख्दैन । क्रूर शासकले सीमापारि अड्काएका असंख्य नागरिकहरु अब भित्रिन थालेका छन् । जब पारि थिए, ती रातोदिन खचाखच भीडमा बस्न बाध्य भए । तिनलाई न खान्की गतिलो थियो, न दूरी मिलाउने ठाउँ थियो । झुलाघाट र धार्चुला नाकाबाट ती एकै दिन २६०० जना भित्रिए । तिनको भित्रिने क्रम अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ । ती देहमा अदृश्य शत्रु बोकेर पो आएका छन् कि ! ती अब क्वोरेन्टाइनमा बस्छन् कि यत्रतत्र फुक्काफाल हिँड्छन् ? लामो दूरीका सडकमा त्यो भद्रगोल छ, सीमा क्षेत्रमा त्यो अस्तव्यस्तता छ । यता शहरमा लकडाउनको यो कुरुप नाटक किन मञ्चन भइरहेको हो ? दरबारबासी शासकहरुलाई यसबारे शायद उत्रो चासो र चिन्ता छैन । तिनको चासो र चिन्ता अन्तै छ । त्यो कता र केमा छ भन्नु हुँदैन । कति राम्रोसँग चलिरहेको शासनतन्त्रमा अस्थिरताको पैरो जान्छ !
‘पत्रिका प्रकाशन गर्न पाइने, बेच्ने पसल खोल्न नपाइने ! तरकारी ढुवानी हुने, किन्न जानेलाई सखारै पनि सडकमा उभ्याइदिने ! औषधि व्यवसायी संघले खोल्नैपर्छ भनेको ३ पेट स्टोरको ढोकामा प्रहरी आएर बन्द गराउने ! हामीले नबुझेको कि बुझाउन नसकेको ? यसको जबाफ कता पाइएला ?’ अमृता लम्सालको ट्वीटको जिज्ञासा हो यो । उत्तर कतै पाइँदैन, अमृता । उत्तर दिने सत्ताको सर्वोच्च आसनमा जो विराजमान छ, उत्तर उसैलाई थाहा छैन । उसलाई त मलाई उत्तर थाहा छैन भन्ने पनि थाहा छैन । शासनतन्त्र जस्तो छ, लकडाउन त्यस्तै छ । भद्रगोल, अस्तव्यस्त, अराजक र मनपरी ! शासकहरु जे कुरामा व्यवस्थित छन्, त्यो भन्न मिल्दैन । भने सुन्दर शासनतन्त्रको स्थिरताको जग हल्लिाएको बात लाग्ने खतरा छ ।
‘घरभित्र बस्नेलाई कोरानाको त्रास, घरघरबाट निस्किएको फोहोर उठाउने मजदुरसँग न पन्जा छ न मास्क ।’ ल हेर चिन्ता ! शासक झुण्डलाई केवल खानको चिन्ता, ट्वीटे दिपका अधिकारीलाई फोहोर उठाउने मजदूको चिन्ता । चिन्ता सही हो, पार्टनर । तर यो चिन्ता जसप्रति लक्षित छ, उसलाई यसको बाल मतलब छैन । सत्ताशीन ख्वामित्हरुलाई यो मुलुकमा श्रमिक, गरिब र दीनदुखीहरु पनि छन् भन्ने कुराको सम्झना छैन । सम्झना थियो होला कुनै बेला । यति होल्डिङस्, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस पार्टनर, ओम्नी कमरेड आदि इत्यादिसँग मोयामोह र दिनु–खानुको सम्मोहक नाता जब गाँसियो, पुरानो स्मृति विस्मृतिको गर्तमा विलीन भयो ।
विश्वको ‘विशालतम लोकतन्त्र’का महाराज मोदीले लकडाउन दुई हप्ता थपे । जसोजसो बडे दादा, उसैउसै छोटे भैयाको तालमा यता पनि लकडाउन थपिन बेर छैन । पिन्जराको सुगाले जानेको जम्मा कुरा मालिकको बोलीमा लोली मिलाउनु त हो ! यो लोली मिलाई घोर आपत्तिजनक छ । यो सर्वथा अस्वीकार्य छ । यसको ठाडो अवज्ञा गरिनुपर्छ । यो अराजक लकडाउनले जनजीविका र अर्थतन्त्रमा कति घात गरिसक्यो, शासक महलका बडे काजीहरुलाई खासै मतलब छैन । बेरोजगार र भोका जन एक स्वरमा भनिरहेछन्— हामीलाई कोरोना भाइरसले भन्दा पहिल्यै भोकले मार्ने भो !
विश्वको ‘विशालतम लोकतन्त्र’का महाराज मोदीले लकडाउन दुई हप्ता थपे । जसोजसो बडे दादा, उसैउसै छोटे भैयाको तालमा यता पनि लकडाउन थपिन बेर छैन । पिन्जराको सुगाले जानेको जम्मा कुरा मालिकको बोलीमा लोली मिलाउनु त हो ! यो लोली मिलाई घोर आपत्तिजनक छ । यो सर्वथा अस्वीकार्य छ । यसको ठाडो अवज्ञा गरिनुपर्छ । यो अराजक लकडाउनले जनजीविका र अर्थतन्त्रमा कति घात गरिसक्यो, शासक महलका बडे काजीहरुलाई खासै मतलब छैन । बेरोजगार र भोका जन एक स्वरमा भनिरहेछन्— हामीलाई कोरोना भाइरसले भन्दा पहिल्यै भोकले मार्ने भो ! सत्ताको अतिशय मादक नशामा लठ्ठ भएको शासक झुण्डले सामान्य जनको यो दारुण चीत्कार के सुन्थ्यो ! ऊ त अर्कै कुरा सुन्नमा लिप्त छ । के सुन्नमा ? त्यो भन्नु हुँदैन । किन ? समृद्धिको सिर्जना र सुखको वितरणमा कति राम्रोसँग लागिपरेको सरकारको सिंहासनमा अस्थिरता पैदा हुन्छ ।
कोरोना भाइरसग्रस्त इटलीको उत्तरी भेगमा जेन भन्ने एउटा तन्नम बस्ती छ । त्रिचालीस वर्षीय रोजी पेन्साटो त्यो बस्तीकी एक गरिब बासिन्दा हुन् । उनको लकडाउन अनुभव सुनिनसक्नु अप्रिय छ । उनी भन्छिन्, ‘जसको फराकिलो निवास छ, र लकडाउन सिद्धिएपछि जसलाई स्वागत गर्न जागिर पर्खिरहेछ, उसलाई ‘घरैमा बस’ भन्न सजिलो छ । जसको आउने अनेक महिनासम्म धान्ने ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, यो दुःखमा हामी सबै साथ छौँ भन्न उसलाई सजिलो छ । तपाईँ आफूलाई हाम्रो ठाउँमा राखेर सोच्नोस्त । हामी कोभिड– १९ अघि नै गरिब थियौँ । यो महामारी टुङ्गिदा हामी झन् गरिब हुनेछौँ ।’ (द गार्डियन, ३० अप्रिल २०२०)
गरिब रोजी पेन्साटोको यो हृदयविदारक चीत्कारमा दशौँ लाख नेपाली गरिबको चीत्कार बोल्छ । समृद्धिको सिर्जना र सुखको वितरणमा दत्तचित्त भएको अतिशय कुरुणामयी ओली सरकारलाई यो चीत्कार भन्छ— तिम्रो निहित राजनीतिक स्वार्थ र सनकको तुष्टिका लागि लकडाउन अब किमार्थ नथप !
लुकिँदैन, लडिन्छ र जितिन्छ
सरकार अस्वस्थ, स्वास्थ्य नीति बर्बाद
बाहुबली स्वास्थ्य नीति, सरकारी नरकयात्रा
दुई कोरोना विशेषज्ञ— तल पुन, माथि ओली
कोरोना कालमा छिमेकीको माया
धन्दा ठगीको, सरकार नेकपा डबलको
ओली पक्षले सुनसरीमा समानान्तर कमिटी बनाएको हो, वैधानिक अध्यक्ष बस्नेत हुन्
फाइजर खोप दीर्घरोगी बालबालिकालाई
जिमनास्टिक प्रतियोगितामा भाग लिन बंगलादेश जाने खेलाडीहरूको विदाई
काँग्रेसपछि एमालेले पनि गर्‍यो कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग